Dhaqaalaha gobolka, iskaashiga tooska ee WEDA - Wasaaradda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Dhaqaalaha gobolka, iskaashiga tooska ah ee WEDA
Had iyo jeer waa wax lagu farxo in lala soo ururiyo hoggaamiyeyaasha dawladaha hoose, qabiilooyinka, ururada horumarinta ganacsiga (ADOs) iyo la-hawlgalayaasha kale ee bulshada si aan ula wadaagno guulaheena, fursadaha iyo fikradaha cusub ee Shirka Xagaaga ee Ururka Horumarinta Dhaqaalaha Washington. Marka laga soo tago ka qeyb qaadashada laba maalmood oo weyn oo dhageysi, barasho iyo isku xirnaan ah, waxaan sidoo kale fursad u helay inaan la hadlo kooxda.
Waxaan la wadaagay natiijooyin wax ku ool ah xilli ciyaareedkii la soo dhaafay - anigoo ka bilaabaya Xafiiskayaga cusub ee loo yaqaan 'Broadband Office', oo ay ku jiraan $ 21 milyan oo deeqo iyo amaah cusub ah si kor loogu qaado sinnaanta dhijitaalka loona suurtageliyo fursad iyo barwaaqo badan oo ka jirta miyiga iyo bulshooyinka aan la hubin.
Marka lagu daro $ 500,000 maalgashiga cusub ee shirkadda, waxaan hadda ka caawin karnaa shirkadahayada ugu yar - meel kasta oo ay ku yaalliin - helno fursad aan ku noqon karno halyeeyga soo socda ee liistada Washington "A".
Wadashaqaynta ayaa fure kale u ah guusha, gaar ahaan dhisidda iyo kobcinta dhaqaalaha gobolka Washington.
Kordhinteenii ugu horreysay ee maalgelinta ADOs ka dib in ka badan 10 sano oo goyn ah ayaa caawin doonta! Waxaan ku faraxsanahay durbaanka isku dhafka ah ee ka dhashay guusha $ 1 milyan ee maalgelin cusub oo loogu talagalay horumarinta dhaqaalaha maxalliga ah.
Sheekada dhaqaale ee Washington waa mid aad u layaableh markaad meel fog ka eegto. Kobacayada waxsoosaarka gobolka ayaa sii wadaya hogaaminta qaranka iyo shirkadaha sida Amazon, Microsoft iyo Starbucks waxay sii wadaan hal-abuurnimada iyo kobcinta sheekooyinka guusha adduunka.
In kasta oo inta badan dhaqdhaqaaqaas dhaqaale uu ku urursan yahay Bartamaha 'Puget Sound', haddana waxaa jira sheekooyin hadda la qorayo ama dib loogu qorayo qaar ka mid ah dhaqaalaha kale ee gobolka ku hareeraysan.
Kaliya waxaan joogay Tri-Cities-ka waxaanan la kulmay laba shirkadood oo ku guuleysanaya aqoonsi caalami ah oo ku saabsan wax soo saarkooda beeraha qiimaha leh iyo agabyada horumarsan. Marka la isku daro hantida shirkadaha wanaagsan, xerada WSU ee ku taal halkaas, PNNL iyo xoogaa injineernimo iyo tayo farsamo, Benton iyo gobolka Franklin County waxay leeyihiin waxyaabo lagu dejiyo miiska barwaaqada dhaqaale ee jiilka soo socda.
Tusaalooyin badan oo ku saabsan iskaashiga gobolka ee guuleysta waxaa ka mid ah:
Hoggaamiyeyaasha qabaa'ilka ee Suquamish, Colville, Jamestown S'Klallam iyo Qabiilooyinka ku xiran ee NW Indians ayaa hoggaamiyay dood cilmiyeed aad u wanaagsan: "Beddelidda Horumarinta Dhaqaalaha ee Goob Shaqeed Is Beddel ah"
Gobolka Clallam iyo Jefferson oo ay ku jiraan wada shaqeynta dhowr Qowmiyado Qabiil iyo dowladaha hoose si looga faa’iideysto aagagga Fursadaha
Gobolka Dooxada Wenatchee iskaashiga qorshaynta istiraatiijiyadeed ee "Dooxdeenna, Mustaqbalkeenna" iyo aqoonsashada meelaha diiradda muhiimka ah ee ku xeeran hal-abuurnimada iyo horumarinta ganacsiga
Xidhmada 5 iskaashiga ka dhexeeya Southwest Washington ADOs ee Thurston, Mason, Grays Harbor, Lewis iyo gobolada Pacific.
In kasta oo kobaca dhaqaalaha ee firfircoon ee Puget Sound uu shaki ku jiro inuu waxtar u leeyahay gobolka oo dhan, haddana waxaannu haysannaa waxyaabo badan oo aan ku kasban karno annaga oo taageerna oo xoojinna dhaqaalaha gobolka ee aan haysano.
Way fiicantahay inaan sii wadno inaan ka helno shaqooyinka tikniyoolajiyadda California. Laakiin markay shirkadaha ka weynaadaan suuqa Seattle, waa inaan u soo jiidannaa Tacoma, Spokane, Vancouver iyo Yakima halkii aan ka arki lahayn inay aadayaan Salt Lake, Denver iyo Detroit.
Waxaan u baahanahay inaan bilowno ka hadalka sida loo kobciyo loona taageero dhaqaalaheena goboleed iyadoo lagu dhisayo awoodahooda gaarka ah. Hal dariiqo ayaa ah in la waafajiyo kheyraadkeena, oo ay ku jiraan kuwa laga helo hay'adahayada cilmi baarista, si loo helo shaqaale diyaar u ah xirfadaha shaqo ee qarniga 21aad ee loo baahan yahay si loo soo jiito loona joogteeyo shirkadaha horudhaca u ah koritaanka mustaqbalka.
Agaasimaha Ganacsigahorumarinta dhaqaalahaLisa Brownbulshooyinka reer miyiga ahXoojinta bulshada
← Ogeysiiska Helitaanka Maalgelinta ee Barakaca Guryaha Guurguura ee Koonfurta King County Booqashooyinka bulshada waxay ansaxiyaan awooda iskaashiga →